Isetshenziselwa ukugcina, ukuhambisa nokufaka kabusha ama-reagents ahlukahlukene oketshezi noma izinto zokusetshenziswa ze-powder. Iningi lamabhodlela e-reagent enziwe nge-polypropylene futhi anokusebenza okuhle kokuvala. Ikepisi nomzimba webhodlela kudizayinelwe ukuphazamiseka okufanelekile ukuqinisekisa umphumela omuhle wokuvala ngaphandle kwamagaskethi. Amabhodlela e-reagent epulasitiki asetshenziselwa kakhulu ukuhlola ama-reagents (ama-vitro diagnostic reagents) nokunye ukufakwa ketshezi.
1.Khetha izinto zokusetshenziswa ezinokubekezelelana okuhle kwamakhemikhali, abukho ubuthi begazi, izinga lokushisa eliphakeme nokucindezela kokuvala inzalo.
Umlomo webhodlela usebenzisa ukwakheka okungavuzeki, akukho cap yangaphakathi noma isher yangaphakathi, okulula ukuyibona evuzayo.
Umlomo webhodlela wakhelwe ngomlomo obanzi, okulula ukuthatha uketshezi futhi ugweme ukungcoliswa kokuhlukana.
4.Easy ukugcina nokuthutha imikhiqizo ketshezi kanye powder.
5.Special ibhodlela umlomo design, cap ukuphotha off umkhakha, akukho pad yangaphakathi, ukuvimbela ukuvuza ketshezi;
I-6.Sterile, reagent kanye nesisombululo kungafakwa emabhodleleni ngemuva kokugcinwa kwesikhathi eside;
7.Can kube isikhathi eside lokushisa ongaphakeme, isitoreji eqandisiwe, ibhodlela akusho ufa.
Ukuze amakhasimende anezidingo ezikhethekile, singakwazi futhi ukuklama nokuthuthukisa ubujamo obusha bebhodlela nezikhunta ezintsha zamakhasimende ngokwehlukana, futhi singashiya i-LOGO engabonakali yamakhasimende kumikhiqizo.
Umzimba webhodlela wenziwe nge-polyethylene ephakeme kakhulu, kanti ikepisi lebhodlela lenziwe nge-high-permeability polypropylene, enokumelana okuhle kwamakhemikhali futhi engenziwa inzalo ngemisebe.
Ibhodlela le-reagent le-10Diagnostic lingasetshenziselwa ukupakisha isisombululo somshini wamanzi ojwayelekile, elifanele uhla lwe-pH 5.5-9.0, alifanele ukwehliswa okunamandla kokupakisha ketshezi.
Cha. Incazelo Ivolumu I-Cap Umbala Izinto Ukupakisha / Ama-Ctns
PC1068 ibhodlela reagent 5ml Intulo Mhlophe / Brown I-Polypropylene 2200
PC1069 ibhodlela reagent 8ml Intulo Mhlophe / Brown I-Polypropylene 2000
PC1070 ibhodlela reagent 20ml Intulo Mhlophe / Brown I-Polypropylene 1800
PC1071 ibhodlela reagent 30ml Intulo Mhlophe / Brown I-Polypropylene 800
PC1072 ibhodlela reagent 60ml Intulo Mhlophe / Brown I-Polypropylene 500
Langaphambilini I-Cryogenic Microtube
Olandelayo: Plate uphawu
Ngezansi kwe-Reagetn nge-screw cap
I-Viral DNA / RNA Extraltion kit (Magnetic Ubuhlalu)